Ny CTO dia manohy ny fanentanan'ny Governemantan'ny taonjato faha-21 any St.Vincent sy ny Grenadines
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Saint Vincent sy ny Grenadines vaovao momba ny dia » Ny CTO dia manohy ny fanentanan'ny Governemantan'ny taonjato faha-21 any St.Vincent sy ny Grenadines
Taorinan'ny fahombiazan'ny tetikasan'ny Governemanta taonjato faha-21 tamin'ny fihaonamben'ny governemanta tany Antigua sy Barbuda tamin'ny Janoary 2018, dia hanolotra ny Union Telecommunications Union (CTU), amin'ny atrikasa any St.Vincent sy Grenadines ny volana martsa 2018, rafitra politika sy torolàlana amin'ny fampiharana ny Governemanta taonjato faha-21.
Ny Governemanta taonjato faha-21 dia iray izay mampiasa amin'ny fomba mahomby ny teknolojia fampahalalam-baovao sy fifandraisana (TIC) hanaterana ny serivisy ho an'ny olom-pireneny, sy ireo mpanjifany anatiny sy ivelany. Izy io dia miavaka amin'ny fizotran'ny olom-pirenena, tsy milamina, misokatra, mifanerasera, mahomby ary mangarahara. Hanova ny serivisy ho an'ny daholobe ny governemanta Century 21, hanamafy ny fifaninanana ara-toekarena ary hampiroborobo ny fampandrosoana maharitra. Firenena maro no nampiditra serivisy ho an'ny governemanta elektronika (e-Government) saingy niadana be ny fizotrany.
Ny Governemanta St.Vincent sy ny Grenadines, miara-miasa amin'ny Union Telecommunications Union, dia handray ny Herinandron'ny TIC - St.Vincent sy ny Grenadines ny 19 ka hatramin'ny 23 martsa 2018 tao amin'ny Beachcombers Hotel, Villa, St.Vincent. Ny herinandro dia manana ny lohahevitra ho an'ny Governemanta taonjato faha-21, miorina amin'ny fototra napetraka ao Antigua sy Barbuda.
Tao amin'ny lahateny nataony tamin'ny Budget tamin'ny taona 2018, Hon. Camillo Gonsalves, minisitry ny fitantanam-bola ao St.Vincent sy ny Grenadines, izay tompon'andraikitra amin'ny TIC, dia nanambara fa ny governemanta "dia tapa-kevitra ny hampiasa teknolojia fifandraisan-davitra fampahalalana (" TIC ") handroaka sy hanafainganana ny fampandrosoana any Saint Vincent sy ny Grenadines. Ny fahafahantsika mamorona tontolo iainana ho an'ny fampiasana TIC mahomby sy feno dia miankina amin'ny (i) fanitarana sy fanatsarana ny fotodrafitrasa TIC; (ii) famoronana laminasa ilaina amin'ny rafitra, andrim-panjakana ary politika ilaina amin'ny fampiasana sy fampiasana ny TIC mahomby; iii) fanitarana ny fahaiza-manao ilaina amin'ny governemanta, ny sehatra tsy miankina ary ny fiarahamonim-pirenena; sy (iv) fanamorana ny fitomboan'ny fanavaozana azo ampitaina amin'ny TIC, indrindra eo amin'ireo tanora, orinasa kely ary mpandraharaha. ”
Raha niresaka ny maha-zava-dehibe ny fandraisana andraikitra, Rtoa Bernadette Lewis, sekretera jeneralin'ny CTU, dia nanambara fa: "Ny programa hananganana Governemanta taonjato faha-21 ao Karaiba dia zava-dehibe mba hiantohana ny firenentsika hanafaingana ny fanomezana serivisy e-Government, hanova ny asam-panjakana ary handeha mitovy amin'ny hafa izay efa manana Governemanta toy izany. ”
Nanamafy ny fanoloran-tenan'ny CTU sy ny mpiara-miasa aminy voalohany, Caribbean Center for Administration Development (CARICAD), hanohana ireo governemanta isam-paritra amin'ny fanafainganana ny fandrosoana mankany amin'ny Governemanta faha-21, hoy hatrany izy: hiara-hiasa amin'ny governemanta tsirairay hanamorana ity asa ity. Fandraisana an-keriny ny fitsipiky ny Governemanta taonjato faha-21 dia asa sarotra izay mitaky fialana amin'ireo lalan'ny governemanta izay tsy manompo antsika intsony. Amin'ny farany, miaraka amin'ny finiavana politika takiana, ny faritra dia afaka manomboka sy manafaingana ny dia mankany amin'ny Governemanta taonjato faha-21. ”
Ho fanampin'ny fiantsoana ny fivorian'ny Filan-kevitry ny mpanatanteraka faha-36 an'ny CTU dia hanasongadinana ny Herinandron'ny ICT ny atrikasa momba ny governemanta taonjato faha-21 izay hanomana ny mpandray anjara rehetra handray sy hanafaingana ny fandrosoana mankany amin'ny Governemanta faha-21.
Hetsika hafa, toy ny Forum fiaraha-miasa amin'ny ICT any Karaiba amin'ny 21 martsa izao, dia hampiroborobo ny fiaraha-miasa eo amin'ny minisitra miaraka amin'ny fifantohana amin'ireo rafitra hanamorana ny fampiharana mavitrika ireo tetikasa samihafa voamarina fa manakiana ny fampandrosoana ny firenena ary ny fampandrosoana an'i Karaiba. Ny ankamaroan'ireny tetik'asa ireny dia tena ilaina amin'ny governemanta taonjato faha-21.
Ny TIC faha-2 ho an'ny sehatry ny sehatry ny fahamarinana, amin'ny 21 martsa koa, dia hijery bebe kokoa ny fomba hanatsarana ny TIC ny fitantanana ny sehatry ny fitsarana any amin'ny faritra.
Ny programa fanofanana momba ny fananganana GSMA maharitra roa andro, ny 21 ka hatramin'ny 22 martsa ho avy izao, dia hiresaka momba ny fitsipiky ny Governemanta Aterineto, hiresaka sy hamakafaka ny tena vokany na ny mety ho vokatr'ireo fomba fiasa politika samihafa.
Atrikasa efatra momba ny TIC ho an'ny olona manana fahasembanana (PWD) dia hatao amin'ny 22 martsa mba hampisehoana amin'izy ireo ny herin'ny TIC hanova ny fiainany.
Hofaranana amin'ny 23 martsa ny hetsika mandritra ny herinandro amin'ny alàlan'ny CTU's Caribbean ICT Roadshow izay natao hanentanana ny besinimaro sy hianatra momba ny TIC ary hanome tombony azo tsapain-tanana, indrindra ho an'ireo Tanora sy Mpanavao. Fora dimy samy hafa no hotanterahina.
Boeing 737 MAX 7 mamita ny sidina voalohany mahomby
Ny minisitry ny kolontsaina marolafy dia mandeha maitso mankalaza ny fetin'ny St. Patrick